Amaphepha Amhlophe Aqhuba Ukuthengisa: Amathiphu ama-5
NgoMgqibelo, Agasti 23, 2014 NgoLwesihlanu, Agasti 22, 2014 Douglas Karr
Isonto ngalinye, ngilanda amaphepha amhlophe futhi ngiwafunde. Ekugcineni, amandla wephepha elimhlophe alikalwa, hhayi ngenombolo yokulandwayo, kepha yimali engenayo oyitholile ngokuyishicilela. Amanye amaphepha amhlophe angcono kunamanye futhi bengifuna ukwabelana ngemibono yami ngalokho engikholelwa ukuthi kwenza iphepha elimhlophe elikhulu.
Iphepha elimhlophe uphendula udaba oluyinkimbinkimbi ngemininingwane nedatha esekelayo. Ngibona amaphepha amhlophe angavele abe okuthunyelwe kwebhulogi. Iphepha elimhlophe akuyona into ofuna ukuthi lithole kalula online, kungaphezulu kakhulu kwalokho - ngaphezu kokuthunyelwe kwebhulogi, ngaphansi kwe-eBook.
Iphepha elimhlophe wabelana ngezibonelo ezivela kumakhasimende angempela, amathemba, noma ezinye izincwadi. Akwanele ukubhala idokhumende elisho lo mqondo, udinga ukunikeza ubufakazi obufanele balo.
Iphepha elimhlophe ngu kuyajabulisa. Ukuvela kokuqala kuyabala. Lapho ngivula iphepha elimhlophe bese ngibona iMicrosoft Clip Art, imvamisa angifundanga ngokuqhubekayo. Kusho ukuthi umbhali akazange athathe isikhathi… okusho ukuthi mhlawumbe abazange bathathe isikhathi ekubhaleni okuqukethwe, noma.
Iphepha elimhlophe ngu hhayi ukusatshalaliswa ngokukhululekile. Kufanele ngayibhalisele. Uhweba imininingwane yakho ngolwazi lwami - futhi kufanele ungilinganisele njengomholi ngefomu lokubhalisa elidingekayo. Amafomu wekhasi lokufika afezwa kalula kusetshenziswa ithuluzi elifana ne umakhi wefomu online. Uma ngingazimisele ngesihloko, bengingeke ngilande iphepha elimhlophe. Nikeza ikhasi elihle lokufika elithengisa iphepha elimhlophe bese liqoqa imininingwane.
Iphepha elimhlophe elinamakhasi ama-5 kuye kwangama-25 kufanele kuphoqe kwanele ukuthi ngikuthathe njengegunya nomthombo kunoma yimuphi umsebenzi. Faka izinhla zokuhlola nezindawo zamanothi ukuze angafundiwe nje noma alahlwe. Futhi ungakhohlwa ukushicilela imininingwane yakho yokuxhumana, iwebhusayithi, ibhulogi kanye noxhumana nabo emphakathini ngaphakathi komzimba womsebenzi.
Kunezindlela ezimbalwa zokwenza amaphepha amhlophe acindezele ngokwanele ukushayela ukuthengisa.
Transparency - Okokuqala ukutshela umfundi ngokusobala ukuthi uyixazulula kanjani inkinga yabo ngemininingwane ephelele. Imininingwane incane impela, empeleni, ukuthi kunalokho bangakubiza ukuthi unakekele inkinga kunokuzenzela bona uqobo. Abazenzayo bazosebenzisa imininingwane yakho ukukwenza bebodwa…. ungakhathazeki… bebengasoze bakubize nganoma ikuphi. Ngibhale amaphepha ambalwa ekwandiseni ibhulogi yeWordPress - akukho ukushoda kwabantu abangibizayo ukuthi ngibasize bakwenze.
Ukufaneleka - Indlela yesibili ukuhlinzeka umfundi wakho ngayo yonke imibuzo nezimpendulo ezikufanelekela ukuba ngumthombo wabo kangcono kunanoma ngubani omunye umuntu. Uma ubhala iphepha elimhlophe ku- “How to hire a Social Media Consultant” futhi unikeza amakhasimende akho izinkontileka ezivulekile ezingashiya noma kunini… yenza leyo ngxenye yephepha lakho lokuxoxa ngezinkontileka! Ngamanye amagama, sekela futhi udlale ngamandla akho.
Call to Action - Kuyangimangaza ngempela ukuthi mangaki amaphepha amhlophe engiwafundile lapho ngiqeda khona lesi sihloko futhi anginalo noluncane ulwazi ngombhali, ukuthi kungani befanelekile ukubhala ngesihloko, nokuthi bangangisiza kanjani ngokuzayo. Ukuhlinzeka ngokusobala kokubizelwa esenzweni kwephepha lakho elimhlophe, kufaka phakathi inombolo yocingo, ikheli, igama nesichwepheshe sakho sokuthengisa nesithombe, amakhasi wokubhalisa, amakheli e-imeyili… konke kuzoqinisa ikhono lokuguqula umfundi.
Tags: Ukukhangisa Okuqukethweubhala kanjani iphepha elimhlopheamaphepha amhlophe okuthengisaI-Whitepaperamathiphu okubhala
Abantu abangama-57% abakuncomi ngoba…
Jul 24, 2010 ngo-4: 16 PM
Amaphuzu amahle, uDoug. Ngithole nokuthi izinkampani eziningi ezizama ukusebenzisa amaphepha amhlophe ukusheshisa inqubo yokuthengisa zishiya izithako ezimbili ezibaluleke kakhulu. Okokuqala, ngabe bachaza inkinga ebonakalayo ngokuphelele ebhekane nobuhlungu kulokho abakunikeza njengomkhiqizo noma insizakalo, futhi okwesibili, yini ebenza bahluke? Akunjalo kangcono. (Umthengi uzonquma ukuthi, noma ngabe umthengisi angakusho kangaki).
Jul 24, 2010 ngo-9: 31 PM
@freighter, angiphikisi ukuthi kufanele uchaze ukuthi yini umehluko wakho - kepha akusekho muntu othembela enkampanini ngokwethembeka ngokusho nje ukuthi bahlukile. Kungakho kubaluleke kakhulu ukuthuthukisa umlayezo ofanelekayo ngaphakathi kwephepha elimhlophe. Ngokuchaza iziqu, ungazihlukanisa!